Company Makiinado Point High Ningbo Profile
Automotive & mooto Qaybo
qaybaha kabuufi & saar
OEM dhinta Castings
aluminium china guryaha light
china qaybo saldhig Gudoomiyaha auto aluminium warshad
Cadaadiska High jirka kabuufi Aluminum
Waxaan leenahay ka badan toban sano ka soo saarta Khibrad, Professional motor kabuufi caadada, bamka hawada kabuufi iyo hiitarka taageere
Supply Kartida: 20000-50000Piece / Cadad per Month
Waxyaabaha: Aluminum / Zinc
Alaabta halkan ku cad yahay oo kaliya in ay soo bandhigaan baaxadda waxqabadyada ganacsi. Waxaan sameeyo kartaa wax kasta oo qaybo ka mid
sida in aad sawir ama saamiga.
wax Part: ADC12
Dusha: engeeg Sand
Qarameedka hab: CNC
Annagu waxaannu nahay saaraha OEM oo ku takhasusay aluminium saarka kar dhiman ridaya qaybo, u samayn karaan oo dhan
geedi socodka ka caaryada design-caaryada-imtixaanka qaadashada -die caaryada shubay-machining-dusha daaweyn-baaris in our u gaar ah
warshad, caymiska Product of mashiinada dhismaha, qalabka isgaarsiinta, nidaamka awood baabuurta, korontada
forklift, baabuurta korontada, qalabaynta warshadaha iyo beeraha kale ee la xiriira.
Aluminum Laydhka Housing:
Baako iyo Gaadiidka:
A: Waxaan nahay saaraha xirfadle qorshaynta iyo soo saarida
S: Ma waxaad u samaysaa wax soo saarka habka ama qaybo dhammeeyey?
A: dhammaan qaybaha ma aha in stock, caadadii ka dhigay si waafaqsan sawirada macaamiisha ama noocyo! Haddii aad qabto qaybo ka mid in la sameeyo, fadlan si xor ah u noo soo dir aad sawiro nooc / baarka.
S: sawir ku noqon doonaa ammaan ka dib marka aad ku heli karaa?
A: Haa, ma aynu sii daayo doonaa design cid saddexaad haddii aad fasax.
S: Waa maxay MOQ ah?
A: Sida caadiga ah ma waxaan dhigay MOQ, laakiin in, ka jaban ah. Ka sokow, waxaan ku faraxsanahay in la sameeyo noocooda qayb ama muunad macaamiisha caadiga ah si loo hubiyo in tayada.
S: Waxaad samayn kartaa ridaya oo ku salaysan shaybaarka our?
A: Haa, waxaan ka dhigi kara cabbirka ku saleysan shay-in la sameeyo sawiro for qaadashada tooling.
S: Waa maxay qalabka tayada aad guriga?
A: Waxaan leenahay spectrometer, mashiinka baaritaanka siligga iyo ut Sonic sida NDT habka hubinta in la xakameeyo shubay ogaado hoos dusha sare ee loo shubay.
Previous: processing aluminium dhiman OEM ridaya qaybo
Aluminum Oil saar Body
Aluminum Auto Water saar
Die Aluminum Casting Auto Oil saar
Aluminum Oil Haydarooliga saar Body
Aluminum Water saar Housing
Dhiman tuur Aluminum Oil saar
Die Casting saar Waayo Auto
Die Casting bamka biyaha
Bamka Qaybo ka ridaya Die
dhiman ridaya guryaha bamka biyaha aluminium
Aluminum dhiman ridaya Fan Wheel Impeller kabuufi ...
Die Casting Aluminum kabuufi Wheel
aluminium shubay dhiman qaybo kabuufi
Ningbo HIGHPOINT mishiino CO., LTD.